MAALINTA BARI AH OO SHIRWAYNAHA URURKA EPRDF UU KA FURMI DOONO MAGAALADA MAQALE.(warbixin) | Deegaanka News
MAALINTA BARI AH OO SHIRWAYNAHA URURKA EPRDF UU KA FURMI DOONO MAGAALADA MAQALE.(warbixin)
Maalinta bari ah oo ay bisha August tahay 28 ayaa lagu wadaa in magaalada Maqale ee xarunta Deegaanka Tigrey uu ka furmo shirwaynaha Ururka EPRDF oo 24kii sano ee u dambaysayba ka arimanayay Dalka itoobiya.
Shirkan ayaa imanaya xili lixdii maal mood ee u dambaysay uu shirar gaar gaar ah u socday ururada ku bohoobay EPRDF, kuwaas soo doortay Gole dhexe, Gudi fulin waxay sidoo kale iska soo dhex doorteen 9ka xubnood ee uga mid noqonaya ururka EPRDF.
shirkan ayaa waxaa bari kasoo qayb galaya dad kor dhaafaya 1000 xubnood iyada oo qoonda ahaan loosiiyay in ay afarta deegaan ee ku bohoobay EPRDF ay shirkani u soo dirsadaan min 250xubnood taas oo tirada guudna ka dhigaysa 1000 qof, waxayna kunkan qof leeyihiin cod ah in ay wax dooran karaan.
maanta galinkii dambe ilaa caawa ayay martidani kusii qul qulayaan magaaladda maqale si ay maalinta bari ah halkaasi ugu waabariistaan.
shirkan ayaa noqon doono mid lagu lafa guro qorshayaasha Ururkani miiska u saaran oo ay ugu muhiimsan tahay in wax la iska waydiiyo sida uu u hirgalay qorshihii GTP1 iyo sida eegga loo wajihi karo qorshaha GTP2, waxaa kale oo diirada lagu saari doonaa helida biyo nadiif ah, kor u qaadida tayada waxbarashada, caafimaadka iyo guud ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha.
waxaa kale oo iyadana xoogo lasaari doonaa sidii loola dagaalami lahaa musaqa,qabyaalada, nidaamka dulsaarnimada, fikradaha xagjirnimada iyo nabad diidka iyada oo cod buuxo lagu ansixin doono in laga talaaba qaado shakhsiyaad ku naaxay dhigga shacabka ee wali ku dhex dhuumanaya qaab dhismeedka dawladda.
Muhiimada ugu wayn ee shirkan bari furmaya ayaa ah in lasoo doorto shakhsigga 5sano ee soosocoto hogaamin doono taladda dalka taas oo ah mid ay wada sugayaan guud ahaanba shacab waynaha reer itoobiya.
Raysal wasaaraha xilagan haya taladda dalka ayaa lagu soo waramaya in uu yahay shakhsiga wakhti xaadirkan ugu cad cad in uu noqdo Raysal wasaaraha dalka taas oo ay aad u saadaalinayaan saxaafada inta badan wax ka qorta Dalka itoobiya.
isku soo wada duuboo xisbigga EPRDF ayaa lagu amaanaa in uu kor u sooqaaday dhaqaalaha wadan taas oo keentay in wadanka itoobiya mar walba amaan gaar ah loosoo jeediyo sida uu uga midha dhaliyay koboca dhaqaalihiisa waxaana lagu wada in 5ta sano ee soo socotana ay sii laba jobaari doonaan sida uu sheeggay Raysal wasaare desalin.